Igumbi F, Colibri Hotel Lover’s View, Mayto - I-Airbnb
Igumbi F, Colibri Hotel Lover’s View, Mayto
I-Colibri Hotel e-Mayto ihhotela elincane, elikhanyayo, elishaya umoya, elinesitayela se-bohemian elakhiwe ngaphansi kwegquma elehla liqonde esihlabathini esifudumele elikwazi ukufinyelela kumabhishi acwebile angu-2.
Leli gumbi (F) linikeza indawo yokungena esitezi sesibili enombono weLover's Beach nombhede ongu-1 ogcwele. I-A/C ne-WiFi ekamelweni.
Lapho ufika usube umndeni! Siyakwamukela ekhaya, asikwazi ukulinda ukuhlangana nawe!
Isikhala singakwazi ukuhlalisa kahle abantu abadala abangu-2 kumbhede ongu-1 wosayizi ogcwele. I-A/C ekamelweni, amanzi ashisayo nabandayo eshaweni. Abantu bavakashela emhlabeni wonke ukuze bathole ukuthula nemvelo echichimayo, ngakho-ke ukuze sikukhuthaze ukuthi uphumele ngaphandle futhi unqamule lapho uhlala khona asinawo ama-TV emakamelweni. Nokho, kukhona WiFi. Sicela uqaphele ukuthi kunezindleko ezengeziwe zezihambeli ezengeziwe ngaphezu koku (1).
Izilwane zasendle zigcwele lapha. Kuhle kakhulu ukudoba, ukubuka izinyoni, i-lizard ngezikhathi ezithile izovakashela (ngezinye izikhathi ngisho nasemakamelweni) futhi phakathi nenkathi ye-turtle kunekhempu ye-turtle phansi ogwini eyenza ukukhishwa kwezingane nsuku zonke. Ngenkathi yezimvula uzobe usondelene nezinkalankala, azithulu futhi ziyahlekisa uma ukuleso simo. Uma ukuthokozela ukudlala nge-snorkeling uzoba nombono omuhle emanzini eduze kwamadwala, okwanele ngisho nokudoba ngemikhonto!
Ngesikhathi sokufuduka kwemikhomo uzoba nesihlalo esingaphambili ukuze ubabone bedlula nemindeni yabo futhi ngokuvamile sithola amahlengethwa adlulayo kanye nemisebe ehlabayo egxumayo. Kwesinye isikhathi ulwandle luba ne-bioluminescent plankton ekhanyisa isihlabathi nolwandle ebusuku, lokho okumangalisayo, kodwa futhi okungahleliwe.
Amahhotela angomakhelwane anesevisi yokudla, kanye nendawo yokudlela encane edolobheni iletha izivakashi zethu, kodwa khumbula ukuthi awekho ama-ATM noma amabhange eduze ngakho qiniseka ukuthi uthola imali yakho e-Puerto Vallarta ngaphambi kokwehla. Kukhona nedolobhana elimangalisayo lokudoba eliqhele ngemizuzu eyi-8 elinokudla kwasolwandle kwe-stellar nama-oyster asezingeni lomhlaba. Ihhotela elingumakhelwane wethu linesevisi yebha futhi lihamba ngemizuzwana engama-30 ukusuka emnyango wakho.
Asinawo ama-swimming pool, kodwa kukhona amahhotela ambalwa angomakhelwane anayo futhi ahlinzeka ngamaphasi osuku ukuze asebenzise izindawo zawo.
Khumbula ukuthi amabhishi awabikezeleki. Kungase kube nokuzola njengedamu lokubhukuda noma umoya ungaphakama futhi kube namagagasi amakhulu aqhumayo. Zombili ziyamangalisa, kodwa akukho okushiwo ukuthi uzotholani. Futhi ihlobo lapha liyashisa kakhulu futhi linomswakama, kodwa njengoba ngishilo ngaphambili igumbi lifakwe i-A/C.
Sinombono 'weLovers Beach' ukuya eningizimu kanye ne-Mayto beach (14 km ye-virgin beach) ngaphambili. Ukuhamba ngezinyawo okufushane phansi ogwini kukuyisa ekamu lofudu. Kukhona amakhishi amancane amancane edolobheni kanye ne-4 'tienditas' noma izitolo zasedolobheni futhi. Cishe imizuzu eyi-8 eNingizimu (ukushayela) yi-Tehuamixtle okuyindawo yethu esiyintandokazi yokudla kwasolwandle. Futhi banokuqashwa kwe-Kayak lapho noma ungaqasha 'ipanga' ngehora uma ufuna ukuphuma olwandle. Uma uza ukuzosefa, kukhona amabhishi ambalwa ayimfihlo phakathi kwemizuzu eyi-15-30 ukusuka lapho esingakusiza ukukuqondisa kuwo. I-Mayto beach ngokwayo ilungele i-skimboarding. Uma ufuna ukuvakasha kokudoba sinoxhumana naye omangalisayo, kodwa ubhukha ngokushesha ngakho-ke usazise ngesikhathi esiningi ngangokunokwenzeka ukuze sikuxhume. Siphinde sibe ne-masseuse evela emadolobheni ambalwa angeza ukukunikeza massage ogwini (kuncike ekutholakaleni).
Siyatholakala kubavakashi bethu njengoba kudingeka. Izinsuku eziningi sihlala endaweni isikhathi esiningi, kodwa sitholakala njalo ngombhalo noma nge-WhatsApp. Ayikho isignali yefoni edolobheni noma ogwini lolwandle, kodwa uma ulapha sizokwazisa uma singeke sibe khona nganoma yisiphi isikhathi esithile futhi uqiniseke ukuthi unosekelo olusekela noma yiziphi izidingo zingavela ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Siyatholakala kubavakashi bethu njengoba kudingeka. Izinsuku eziningi sihlala endaweni isikhathi esiningi, kodwa sitholakala njalo ngombhalo noma nge-WhatsApp. Ayikho isignali yefo…